दोस्रो कानेपोखरी अध्यक्ष कपको उद्घाटन खेलमा वडा नं. ७ विजयी -
दोस्रो कानेपोखरी अध्यक्ष कपको उद्घाटन खेलमा वडा नं. ७ विजयी
२५ जेष्ठ २०७६, शनिबार १९:३६ June 8, 2019 mophasalLeaveaComment on दोस्रो कानेपोखरी अध्यक्ष कपको उद्घाटन खेलमा वडा नं. ७ विजयी
जेठ २५ गते, कानेपोखरी । खेलकुद विकास समिति कानेपोखरी मोरङको आयोजनामा भएको दोस्रो प्रतिष्ठित अध्यक्ष कप–२०७६,को उद्घाटन खेलमा वडा नं. ७ विजयी भएको छ ।
शनिबार आइतबारेको खेल मैदानमा भएको खेलमा वडा नं. ७ ले वडा नं. २ लाई शून्यको विरुद्ध ५ गोलको अन्तरले विजयी भएको हो । मध्यान्तर अघि खेलको १७ औं मिनेटमा वडा नं. ७ को तर्फबाट रोषन साप्कोटाले १ गोल लगाउँर्दै खाता खोलेका थिए ।
त्यसैगरी खेलको २१ र २४ र्औ मिनेटमा कमल परियारले क्रमश २ गोल लगाएका थिए । त्यसैगरी मध्यान्तर पछि खेलको २२ औँ मिनेटमा आयम गुरुङले १ गोल र खेलको ३३ औँ मिनेटमा बद्रि कार्कीले १ गोल गर्दै ०–५ गोल गरेका थिए ।
खेलकुद विकास समिति कानेपोखरीले अध्यक्ष कप फुटबल, भलिबल, क्रिकेट, व्याडमिन्टन,बुद्धिचाल,एथलेटिक्स,मैत्रिपूर्ण महिला फुटबल खेल र म्याराथुन लगाएतको खेल प्रतियोगिता सुरु गरेको छ ।
उद्घाटन खेललाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कानेपोखरी गाउँपालिका अध्यक्ष ताराबहादुर काफ्ले पानसमा बत्ति बालेर उद्घाटन गरेका थिए । त्यसैगरी अतिथिहरु वडा नं. ५ का वडाध्यक्ष चरण गुरुङ, वडा नंं २ का वडाध्यक्ष सुशिल बुढाथोकी, वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष मोहनप्रसाद अधिाकारी,स्थानीय नेता भोला अधिकारी,सन्तोष फुयल,विवेक लिम्बु, मनोज राजवंशी,हिमप्रसाद तिम्सिना,कुमार फुयल,नविन पौड्याल लगाएत अतिथि रहेका थिए ।
रोजगार बन्न मोबाइल तालिम लिर्दै कानेपोखरीका युवा
गाउँपालिका स्तरीय बाल एकता सञ्जाल गठन
२० भाद्र २०७५, बुधबार ०८:३० September 5, 2018 mophasal
२२ आश्विन २०७५, सोमबार १७:५४ October 8, 2018 mophasal